खुशिकाे खबर ! स्वास्थ्य बीमा विधेयक २०७४ संसदबाट पारित « Naya Bato
खुशिकाे खबर ! स्वास्थ्य बीमा विधेयक २०७४ संसदबाट पारित
एमालेको अवरोधका कारण तत्कालिन मन्त्री थापाले संसदमा पेस गर्न नपाएको विधेयक केही साता अघि स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले पेश गरेका थिए । विधेयक सहयोग गर्ने सवैलाई धन्यबाद दिदै सांसदहरुले दिएको सुझावलाई समेट्दै लैजाने आश्वासन दिए ।
तर, ऐन बनाएर मात्रै नहुने भएकाले ऐनको कार्यान्वयन अवको चुनौती रहेको सांसद थापाले बताए ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री थापाले चार महिनामा आफुले तयार पारेको विधेयक अहिले केही संशोधन सहित पारित भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धी भएको बताए ।
बीमामा आवद्ध हुनका लागि निश्चित रकम प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम पारिवारिक इकाइका आधारमा लिइने छ । तर, गरिबीको रेखामुनी रहेका र प्रिमियम तिर्न नसक्ने परिवारका हकमा सरकार आफैंले रकम तिरिदिने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयक अनुसार नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु उसको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ